Ergooyinkii shirka Muqdisho oo maanta guddiyo laga xulay iyo dastuurka oo lagu wado Arbacada in la meelmariyo. – Radio Daljir
Luulyo 29, 2012 1:58 g 0
Muqdisho, July 29 ? Ergooyinkii ansixinta dastuurka Somaliya ayaa maanta si rasmi ah u guda-galay marxalad cusub oo ku aaddan fulinta hawlaha looga fadhiyo, kaddib markii muddo afar maalmood ah ay ku jireen dulmarid guud oo dastuurka la xiriirtay.
Ergooyinka ayaa maanta laga dhax-xulay illaa 10 guddi oo turxaan-bixiyayaal ah, kuwaasi oo ka kooban min 80 xubnood oo looguna talo galay in ay ka muraashaqoodaan 10 qaybood oo loo ?kala dhigay qodobada dastuurku uu ka kooban, taasoo guddi kastaba ay rog-rogi doonaan hal qayb oo dastuurka ka mid ah, sida uu sheegay wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil.
Guddiyadaan, ayaa ka baaraan-degi doona nuxurrada qodobaysan ee dastuurku uu xambaarsan yahay, waxayna ka il-bogosho kaddib guddikastbaa uu soo gudbin doonaa god-daloolooyinka ay ka heleen qaybtii ay falanqaynayeen, taasoo isku uruurinteeda kaddibna loo gudbin doona wakiillada cusub si ay dastuurka dib ugula laabtaan talo-bixinta ergooyinka.
Dhinaca kale waxaa la shaaciyey xilliga kama dambaysta ah ee loo fariisan doono ansixinta dastuurka, taasoo ku astaysan maalinta Arbacada ah todobaadkaan, taariikhduna ay ku beegan tahay 1-da bisha Aug.
Madaxda sarsare ee dawladda federaalka, uuna ka mid yahay R/wasaare Cabdiweli Maxamed Cali ?Gaas?, ayaa maanta tagay xarunta shirku uu ka socdo, isagoo ergooyinka kula dardaarmay ka miro-dhalinta masiirka ummadeed ee ay gacanta ku hayaan.
Sikastaba ha?ahaatee, maalinimada Khamiista ah ee isla todobaadkaan ayaa lagu wadaa shirka ansixinta dastuurku in uu soo gabagaboobo, iyadoo ergooyinkuna ay u kala ambabixi doonaan deegaannadii ay ka yimaadeen, halka issimada Soomaaliyeedna ay dib u soo xuli doonaan wakiillada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo ka koobnaan doona 275 xubnood.